तमोर लिफ्टिङ खानेपानीको परीक्षण
पाँचथर (अस) । पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकास्थित तमोर लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न भएको छ । तमोर खोलाको पानी लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत तानेर यासोक बजार क्षेत्रका धारामा खसालिएसँगै परीक्षण सफल भएको आयोजनाले बताएको छ । संघीय सरकारको रू. ५५ करोड लगानीमा बनेको उक्त आयोजना खानेपानी तथा सर...
पारिश्रमिक नपाएपछि कालोपत्रको काम अबरुद्द
माघ १९, खोटाङ । पारिश्रमिक नपाएपछि खोटाङको महुरे–राजापानी सिमपानी सडक कालोपत्रको काम तीन हप्तादेखि अवरुद्ध भएको छ । ठेकेदार कम्पनी भारत कन्ट्रक्सन सिद्धी शाही जेभीले महीनौंसम्म काम लगाएर पनि भुक्तानी नदिएपछि कामदारले सगरमाथा राजमार्ग अन्तर्गत गाईघाट–दिक्तेल सडक खण्डको मह...
दूध उत्पादन वृद्धि गर्न २०० बिघामा मकैखेती
माघ १९, बनियानी(झापा) । मकैबाट बनाइने पशु आहार ‘साइलेक्स’ उत्पादनका लागि झापामा २०० बिघामा मकैखेती गरिएको छ । झापालाई पशु आहारमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन संघको नेतृत्वमा मकैखेती गरिएको हो । संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले साइलेक्स बनाउन मक...
कम्पोस्ट मल र बायो ग्यास प्लान्ट निर्माण अन्तिम चरणमा
खोटाङ (अस) । रोदाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२, सोल्मामा निर्माणाधीन कम्पोस्ट मल उत्पादन र बायो ग्यास प्लान्ट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय सरकारको विशेष अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजना माघ अन्तिमसम्ममा सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनी मुकुन्द इन्दिरा निर्माण सेवा बडका...
हलेसीको गुरुयोजना तयार
दिवश रिजाल खोटाङ । खोटाङको हलेसी महादेव मन्दिर तथा आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रको गुरुयोजना तयार भएको छ । प्रस्तावित प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरिएको छ । गुरुयोजनाको प्रस्तावित प्रतिवेदन हालै आवश्यक संशोधनसहित पारित भएको हलेसी गुरुयोजना निर्माण समितिका संयोजक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले ज...
अवैध चिट्ठा सञ्चालन गर्ने गिरोह पक्राउ
विराटनगर (अस) । प्रशासनको स्वीकृति नलिई आम सर्वसाधरणलाई ठगी गर्ने उद्देश्यले चिट्ठा योजना सञ्चालन गर्ने चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चिट्ठाका नाममा ठगिएको उजुरी आएपछि प्रहरीले अमन समाज नेपाल नाममा चिट्ठा सञ्चालन गर्ने कमलेशकुमार कर्ण र उनका सहयोगीलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा रंगेली...
हिउँदे अधिवेशनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन आउने
विराटनगर । प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वासले सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउने बताएका छन् । मंगलवार प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै नवनियुक्त राज्यमन्त्री विश्वासले हिउ“दे अधिवेश...
पैठारी घट्दा विराटनगर भन्सारबाट ६ महीनामा लक्ष्यभन्दा ६० % कम राजस्व संकलन
माघ १५, विराटनगर । भारतबाट आयात हुने व्यापारीक मालबस्तुको पैठारी र नेपालबाट फलाम, तामाका तार लगायतका बस्तुको निकासीमा आएको गिरावटको कारण विराटनगर भन्सारको राजस्व लक्ष्यभन्दा ६० प्रतिशतले कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा रू.२५ अर्ब ६६ करोड ८९ लाख संकलन गर्ने लक्ष्...
अनलाइन सपिङका नाममा ठगी गर्ने आठ पक्राउ
विराटनगर । अमेरिकाको बेस्ट बाइ कम्पनीको नाममा नक्कली अनलाइन सपिङ सञ्चालन गरी ३०० जनाभन्दा बढी नेपालीलाई ठग्ने आठ जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मंगलवार उनीहरूलाई रू. ६७ लाख ९९ हजार ७५० नगदसहित पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले बताए । अनलाइन सपिङको ठगी धन्दाका मुख्य अभियुक...
माघ १३, भद्रपुर । कृषिका लागि उर्वर झापा जिल्ला यो वर्षदेखि तोरीमा आत्मनिर्भर बन्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले बताएको छ । तोरी खेतीतर्फ निजी तथा सहकारी खेतीको आकर्षण बढेसँगै उत्पादन बढ्ने भएकाले यो वर्षदेखि झापा आत्मनिर्भर बन्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक शेषराज पौडेल बताउँछन् । &...
पर्वतमा ढुंगाखानीको अध्ययन गरिँदै
तिलोत्तमा नगरपालिका : घर पहिचानमा सहजताका लागि वैज्ञानिक ठेगाना प्रणाली
प्रदेश २ सरकार : तीन चरणमा ४ हजार किमी सडक बनाउँदै
तथ्यांंक कार्यालय भरतपुर : फागुन दोस्रो सातादेखि औद्योगिक गणना
दाङका १६ सामुदायिक वनमा ‘थिनिङ’ कार्यक्रम शुरू